शाकाहारी प्राणी ‘खरायो’ | Yopoho Directory
शाकाहारी प्राणी ‘खरायो’
खरायो लीपोरिडाई परिवारको स्तनधारी प्राणी हो । यो विश्वका विभिन्न देशहरुमा पाइन्छ । संसारको आधी भन्दा बढी खरायो उत्तरी अमेरिकामा पाइन्छ । खरायो प्रायः दूलोमा बस्ने गर्छ । खरायो विशेष गरी जंगल, घाँसको मैदान, मरुभूमि तथा पानी पाइने क्षेत्रमा पाइन्छ । विश्वभरि खरायोको आठवटा प्रजाति पाइन्छ तर जापानमा पाइने अमामी प्रजातिको खरायो लोप हुने क्रममा छ । लौगोमोर्फिया प्रजातिको विकास र हेयर खरायोको भने संख्या बढीरहेको छ । यो सामाजिक तथा सक्रिय प्राणी हो ।
खरायोको भालेलाई बक र पोथीलाई डोई भनिन्छ । बच्चा खरायोलाई किटेन वा किट भनिन्छ । यो शाकाहारी तथा समूहमा बस्न मन पराउछ । यसको कान १० से. मी. लामो अर्थात् चार इन्च सम्म लामो हुन्छ । यसको कान निकै तिखो हुनुका साथै स्मरणशक्ति पनि गज्जबको हुन्छ । यसले टाउको पछाडि नफर्काइ कन देख्न सक्छ । लोप प्रजातिको खरायो संसारमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय छ ।
खरायोले फेब्रुअरी देखि अक्टोबर भित्रमा बच्चा जन्माउछ । खरायोको प्रजननकाल लगभग ३० दिनको हुन्छ । यसको बच्चा लगभग पाँच हप्तामा हिंड्न थाल्छ । प्रयाः यसको बच्चाले ११ दिन पछि आँखा खोल्छ तर लगभग चौध दिन पछि खानेकुरा खान थाल्छ । पाँच देखि ६ हप्ता भित्र यसको शरीरमा रौ पलाउछ तर ६–८ महिनामा शरीर भरि रौ आइ सक्छ । हरेक दुई वर्षमा पुरानो रौ झर्छ र नयाँ पलाउछ । खरायोले विभिन्न किसिमको आवाजहरु निकाल्छ । यसको आयु ९ देखि १२ वर्ष सम्म मानिएको छ ।
Previous: सफा, चम्किलो र कान्तीमय अनुहारका लागि गोमाज (Gommage) (सौन्दर्य)